Which one will be prioritized: Water distribution or Biodiversity Conservation? | Myanmar Affair
Home » Which one will be prioritized: Water distribution or Biodiversity Conservation?
အဆိုပါကိစ္စရပ်ကိုစိမ်းလန်းအမိမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း၏နည်းပညာနှင့်ရန်ပုံငွေအကူအညီဖြင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာကော်မတီမှ၁၂.၁.၂ဝ၁၉ရက်နေ့မှ၁၃.၂.၂ဝ၁၉ရက်နေ့အတွင်းဦးဆောင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးခရိုင်၊ဝေါမြို့နယ်တွင်းရှိမိုးယွန်းကြီးအင်းဘေးမဲ့တော (Moe Yun Gyi Wildlife Sanctuary) သုတေသနစူးစမ်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၀န်ကြီးကပဲခူးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မိုးယွန်းကြီးအင်းကိုစစ်တောင်းနှင့်ပဲခူးမြစ်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားသည့်ပဲခူးတူးမြောင်းသို့လိုအပ်သည့်အခါများတွင်ရေဖြည့်ပေးနိုင်ရန်အတွက်၁၉ဝ၄ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်ရေလှောင်တမံဖြစ်ပြီး၎ဝစတုရန်းမိုင် (၂၅၆ဝဝဧက) ကျယ်ဝန်းသည်။မိုးယွန်းကြီးအင်းကို၁၉၈၈ခုနှစ်ဧပြီလ၂၂ရက်နေ့တွင်မိုးယွန်းကြီးအင်းဘေးမဲ့တောအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၊၂ဝဝ၄ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဆုံး Ramsar Site အဖြစ်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့်နေရာဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
“ဒ်ီခရီးစူးစမ်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကကျွန်တော်တို့ NLD ပါတီအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာကော်မတီ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်၊ပထမဆုံးသွားဖြစ်တဲ့လေ့လာရေးခရီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်အခြားလိုအပ်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုစိမ်းလန်းအမိမြေအဖွဲ့နဲ့ပဲဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်” ဟုအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစခင်ဇော်လင်းကပြောသည်။
Total Visitors: 443921
Unique Visitors: 51978